Home Wararka MW Deni oo diyaariyay liiska Aqalka Sare oo ka koobnaan doono 22...
MW Deni oo diyaariyay liiska Aqalka Sare oo ka koobnaan doono 22 qof oo kali ah
Sida ay noo xaqjiiyeen ilo lagu kalsoon yahay oo ku dhaw Madaxweynaha dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in uu todobaadkan soo saaro liiska murashixiinta u tartamaya Aqalka Sare ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya.
Wararku ayaa into ku darya in madaxweynuhu diyaariyay liiska xubnaha Aqalka sare oo ka kooban 22 qof kuwaas oo laga soo doorn doono Puntland, islamarkaana uu soo saari doono maalmaha soo socda. Sidoo kale, Baarlamanka Puntland ayaa la filaya in uu todobaadkan magacaabo guddiga qabanaya doorashada xubnaha Aqalka sare, si Baarlamanku u doorto xubnahaasi.
Waxaa sidoo kal sheegayaa in dhamaan shaqsiyaadka uu MW Deni rabo in uu soo saaro uu isaga ka bixin doono lacagta is-diiwaan galinta. Baarlamanka oo maalmahan fasax ahaa ayaa sida qorsheysan talaadada berri ah dib uga soo laaban doona fasaxa, si ay u guda-galaan doorashada Aqalka sare.